के भन्छन राष्ट्रपति भवन शीतल निवास आसपासका वासिन्दाहरु ? « News24 : Premium News Channel
के भन्छन राष्ट्रपति भवन शीतल निवास आसपासका वासिन्दाहरु ?
काठमाडौँ । मुलुकको सर्वोच्च निकाय , मुलुकका प्रतिष्ठित व्यक्तिको आसपासमा वस्न पाउदा कतिपयले आफुलाई भाग्यमानी ठान्छन् । सुरक्षा र अन्य सुविधाहरु उपलब्ध हुने कारण पनि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरबार आसपास बस्नेहरु कपितय यस्तै ठान्छन् । हुनत काठमाडौं उपत्यका भित्र भिआइपी क्षेत्र भनेर धेरै ठाउँलाई मान्ने गरिन्छ ।
तर कपितय भने ठूलालाई सुरक्षा र सुविधा पुर्याउँदा आफुहरुलाई असुविधा भएको ठान्छन । मुलुकको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति कार्यालय जहाँ सुरक्षादेखि सम्पूर्ण सुविधाहरु उपलब्ध हुन्छ नै तर राष्ट्रपति कार्यलयसँगै रहेर बसोबास गर्ने आम सर्वसाधरणहरु तथा व्यवसाय गर्नेहरु भने राष्ट्रपतिलाई नजिकैबाट देख्न पाउँदा खुसी समेत महशुस गर्दछन् ।
राष्ट्रपति कार्यलयकै वरपर विगत लामो वर्षदेखि व्यवसाय गरेर बस्नेहरु भने पटक पटक हुने भीभीआइपी सवारी आगमनबाट सडक नै बन्द हुँदा व्यापारमा प्रभाव पर्ने गरेको दुःखेसो व्यक्त गर्दछन् । उनीहरु सडक बन्द हुँदा किनमेलका लागि आउने ग्राहकहरुको संङ्ख्यामा समेत कमी आउने गरेको गुनासो गर्छन् ।
आफ्नै आँखा अगाडि साइरन बजाउँदै गुड्ने भीभीआइपी गाडीको लस्कर हेर्न पाउँदा केहि खुसी महशुस भएपनि भत्किएका सडक धुलाम्मे देख्दा भने खिन्न हुन्छन् सर्वसाधरण । साइरन बजाउँदै हिड्नेहरुले कमसेकम आँफु हिड्ने बाटोको अवस्थामा सुधार गरिदिए सहज हुने बताउँछन् ।
सर्वसाधरणले गर्ने गुनासो मात्र नभई यो त उनीहरुले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्याहरु भएकोले यसतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेमा सर्वसाधरण पनि खुसी हुने थिए । जे भएपनि राष्ट्रपति भवन शीतल निवास वरपरका वातावरण भने शान्त र समुन्नत नै देखिन्छ ।